Aljeeriya oo xiriirka u jartay Marooko - Bulsho News
Aljeeriya oo xiriirka u jartay Marooko
Dowlada Aljeeriya ayaa sheegtay in xiriirkii diblumaasi ay u jartay dalka ay jaarka yihiin ee Marooko oo ay ku eedeeyeen falal ka dhan ah wadankaasi Aljeeriya.
Xiriirka labada wadan ee Carbeed ayaa ahaa mid xun muddo dheer, waxayna labada dowladooda isku heystaan dhulka (Galbeedka Sahara).
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Aljeeriya Ramdane Lamamra ayaa salaasii shalay shaaciyey in xiriirka la jaray isla shalay, walow uu sheegay inay sii furnaan doonaan Safaaradaha labada dowladooda.
Dhinaca dowlada Marooko ayaan weli wax jawaab ah ka bixin go’aanka Aljeeriya.
Xukuumada Aljeeriya ayaa todobaadkii hore ku eedaysay dowlada Marooko inay gacan siiso kooxo argagaxiso ah oo khal khal ku haya amniga Aljeeriya, kooxdaasi oo lagu eedeeyey inay ka danbeysay dabkii la qabad siiyey dhulka kaymaha ah ee wadanka Aljeeriya oo uu khasaaro badan ka dhashay.
Kenya oo dib u dhigtay go’aankii ay ku...
GOP congressman accuses Secretary of State of treason...
Madaxweyne kuxigeenka Puntland oo daahfuray Olole afar malyan...
Beesha Caalamka Oo Soo Dhowaysay Heshiiska Doorashada
Wasaaradda Waxbarashada Puntland Oo Bilowday Qorista Buugaagta Dugsiyada...
Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya iyo WHO oo kawada hadlay...
Puntland Oo Qaabishay Qoysas Cusub Oo Qaxooti Yemeniyiin...
Tababar loo soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada...
Baarlamaanka Puntland Oo Wax Ka Bedel Ku Sameeyey...
Doorashooyinka Isku Sidkan Ee Soomaliland Oo Maanta Loo...
Somalia is walking in Afghanistan’s footsteps
Madaxweynaha Somaliland Oo Isbedel Ku Sameeyey Xukuumadiisa
Taliban replace ministry for women with one restricting...